Wabiga ugu dheer aduunka | Wararka Safarka
Wabiga ugu dheer adduunka
Webiga Niil ee halyeeyga ah ayaa had iyo jeer la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu dheer adduunka, laakiin ka warran haddii uusan ahayn? Cabirka durdurradan ma ahan sida ugu fudud ee ay u muuqato, xitaa ma ahan sawir qaadayaasha sawir qaadaha maadama ay kuxirantahay qodobo kaladuwan: cabirka cabirka la isticmaalayo, halkaasoo hal wabi ka bilowdo iyo mid kale uu ku egyahay (maadaama ay durdurro badan la kulmaan nidaamyada wabiga), dhererkooda ama mugga.
Khubaro badan ayaa ku doodaya in wabiga ugu dheer adduunka uu dhab ahaantii yahay Amazon. Laakiin maxaa muran badan uga jiraa mowduucan? Dhab ahaantii waa maxay webiga adduunka ugu dheer?
1 Wabiga Niil
2 Webiga amazon
3 Aaway khilaafkii markaa?
4 Yaa sabab u leh?
Waqtigan xaadirka ah, cinwaankan Guinness ayaa ku jira muran u dhexeeya Niil iyo Amazon. Dhaqan ahaan, Wabiga Niil waxaa loo aqoonsanaa kan ugu dheer 6.695 kiiloomitir, kaasoo asal ahaan ka soo jeeda Bariga Afrika wuxuuna ku socdaa badda Mediterranean-ka. Safarkeeda inta uu socdo wuxuu ka gudbaa toban dal:
Tan macnaheedu waxa weeye in ka badan 300 milyan oo qof ayaa ku tiirsan wabiga Niil xagga biyaha iyo waraabka dalagyada.Intaas waxaa sii dheer, tamarta ka timaadda durdurkan dabiiciga ah ee biyaha waxaa ka faa'iideysanaya biyo xireenka 'Aswan High Dam', si loo helo awood koronto iyo xakameynta fatahaadaha xagaaga ilaa iyo 1970, waa sanadkii la dhisay. Cajiib! run?
Sida laga soo xigtay adeegga jardiinooyinka Qaranka Mareykanka, webiga Amazon wuxuu cabiraa qiyaastii 6.400 kiiloomitir. In kasta oo aanu ahayn webiga ugu dheer, haddana waa kan ugu weyn adduunka cabir ahaan: qiyaastii 60 jeer ayuu ka badan yahay webiga Niil, oo socodkiisu yahay 1,5% oo keliya midka Amazon.
Haddaan eegno socodkiisa, webiga Mareykanka waa boqorka wabiyada oo dhan maadaama celcelis ahaan 200.000 kun oo mitir kuyuubikii ilbiriqsi kasta ku sii daayo Badweynta Atlaantik. Intaasi waa xaddiga biyaha ay soo daadisay in 5 maalmood gudahood ay ku buuxin karto dhammaan harada Geneva (150 mitir oo qoto dheer iyo 72 kiilomitir oo dherer ah). Xaqiiqdii waa wax laga naxo.
Amazon sidoo kale waxay leedahay marin biyoodka ugu weyn dhulka, kaas oo dhex mara dalal ay ka mid yihiin:
Kaymaha Amazon sidoo kale waxay ku yaaliin dooxadiisa, oo hoy u ah noocyo badan oo duurjoog ah sida naasleyda, xamaarato ama shimbiraha.
Dhinaca kale, Wabiga Amazon waa kan ugu ballaaran adduunka. Markay buux dhaafin weydo, qeybihiisa ugu weyni waxay noqon karaan balac dhan 11 kilomitir. Aad ayey u ballaaran tahay oo isku dayga inaad lug ku dhaafto waxay qaadaneysaa 3 saacadood. Xaqaas ayaad u aqrisay, 3 saacadood!
Aaway khilaafkii markaa?
Marka loo eego adeegga jardiinooyinka Qaranka Mareykanka, Wabiga Niil waa webiga ugu dheer adduunka oo dhan 6650 kiiloomitir halka Amazon uu yahay kan labaad oo leh 6.400 kilomitir. Dhibaatadu waxay timaaddaa markii khubaro kale ku doodaan in Wabiga Mareykanku dhab ahaantii dhererkiisu yahay 6.992 kilomitir.
Mac-hadka Juquraafiga iyo tirakoobka ee reer Brazil ayaa daabacay dhowr sano ka hor baaritaan ay ku sheegeen in Amazon ay tahay wabiga ugu dheer adduunka. Waxay ku gaadheen gabagabada in isha wabiga ay ku taal meel ku taal koonfurta Peru halkii ay ka ahaan lahayd woqooyiga sida ilaa hadda la sheeganayo.
Si loo sameeyo cilmi-baaristaan, saynisyahannadu waxay socdeen laba toddobaad si ay u aasaasaan joogga illaa 5.000 mitir. Ilaa waqtigaas, isha Amazon waxaa la dhigay wabiga Carhuasanta iyo buurta barafka leh ee Mismi, laakiin Bulshada Juquraafiga ee Lima waxay ku xaqiijisay sawirrada dayax gacmeedka in Wabiga Amazon uu ka soo jeedo dooxada Apacheta (Arequipa), sidaas darteed taas oo noqon doonta waa webiga ugu dheer adduunka, oo webiga Nile ka kor mara ku dhowaad 400 oo kilomitir.
Yaa sabab u leh?
Bulshada cilmiga sayniska guud ahaan waxay kusii adkaysanayaan in wabiga Niil uu yahay kan ugu dheer aduunka. Yaa sabab u leh? Lama oga hubaal maxaa yeelay arinta wali dood baa ka taagan. In kastoo, marka la eego ballaca iyo muggiisa weyn, laga yaabee inay lagama maarmaan noqoto in loo janjeero dhanka Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Wabiga ugu dheer adduunka
Timisoara, oo leh qurux Romania